Inona avy ireo sakafo tsara hohanina amin'ny ririnina? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Sakafo amin'ny ririnina - mitady vahaolana
Sakafo amin'ny ririnina - mitady vahaolana
Inona avy ireo sakafo tsara hohanina amin'ny ririnina?
Inona no hohanina amin'ny ririnina mba hafana hatrany
Sesame. Ny sesame dia afaka manampy amin'ny fanoherana ny aretin'ny taovam-pisefoana isan-karazany.
mafanalasopy. Iza no tsy te hanana lovia mafanalasopyamin'ny ririnina mangatsiaka?
Ao amin'ny ririnina dia mora voan'ny sery sy aretina ny vatantsika. Na izany aza, tsy midika izany fa tonga ny fotoana hitsaboana fanafody. Fa kosa, ny fihinanana sakafo ririnina amin'ny vanim-potoana dia mety hampiroborobo ny tsimatimanota, hanafana antsika ary hanampy anao hiady amin'ny volon'ny ririnina.
Ny karoty vaovao, savony volomparasy ary ovy dia mora hita mandritra io fotoana io, ary rehefa faranana amin'ny vanim-potoana dia matsiro sy mahasalama indrindra ny karaoty dia be vitamina A, B6 ary K ary fantatra fa manatsara ny fahitana azy - tantara mahafinaritra momba ny fomba nahazoan'ny karaoty laza manatsara ny fahitana. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa dia nanamaizina ny tanànany ny anglisy mba hisorohana ny fanafihana an'habakabaka alemanina. Saingy na dia tao anaty haizina aza dia afaka nahita fiaramanidina mpiady alemana ny mpanamory anglisy.
Inona no tsy fantatry ny Alemanina fa nampiasan'ny Anglisy ny zava-bitan'izy ireo vaovao, radara. Saingy hitazonana azy ireo ao anaty haizina ohabolana, ny anglisy dia nanaparitaka ny tsaho fa ny karaman'ny mpanamory fiaramanidina dia nomena karaoty maro, izay nanampy azy ireo hahita tao anaty haizina ny Alemanina f ary raha tsara ny masonao ny Karoty, azo antoka fa tsy hanampy anao hahita izany izy ireo. amin'ny maizina. Saingy tena marobe izy ireo.
Azonao atao ny mihinana azy ireo amin'ny salady, manoboka azy amin'ny hummus sasany, manampy azy ireo amin'ny pulaos, na koa manana gajar ka halwa masina! Zahao ny lahatsoratray izay nasongadinay taloha lasa izay momba ny fomba fahandro gajar halwa tsy dia mamy loatra. Ny yam-volomparasy dia feno kalsioma, potasioma ary antioxidant izay manome azy loko miloko volomparasy ho famonoana na hanampiana sabzi mihitsy aza. Undhiyu dia fomba fahandro malaza izay mampiasa yams volomparasy miaraka amin'ny legioma ririnina maro hafa.
Zahao ity kinova mahasalama an'ny kilalao Gujju izay nataontsika fotoana fohy ity, ny ovy mamy dia fantsona be otrikaina misy magnesium, beta-carotene, ary toetra antimicrobial izay tena manampy anao hiady amin'ny aretina. Ampio amin'ny lasopy, sabzi, diozy ho maso ovy mahafinaritra, na mividiana ovy mamy saribao amidin'ny mpivarotra amoron-dalana manerana ny firenena amidy amin'ny ririnina. Ny legioma maintso toy ny epinara, maitso ustard na sarso, fenugreek na methi ary pitipoà maitso dia mamony tanteraka amin'ny ririnina.
Tsy ny epinara ihany no manatsara ny hery fiarovan'ny vatana fa manamafy ny taolana koa ary mampiroborobo ny fahasalaman'ny fo. Ampio amin'ny parathas, malama, paneera palak, na koa bhajiyas marefo. Ny mowing methi dia mety tsy sakafo ankafizinao indrindra, fa mahasalama mahatsara anao kosa.
Manampy amin'ny fitantanana diabeta izy io, mifehy ny kolesterola ary mampanantena ihany koa fa hifehezana ny fahazotoan-komana, izay bonus lehibe. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny Sabzis, Parathas, na Theplas, ary mandritra ny ririnina dia matetika no atao Methiladdus, izay zavatra mahasalama tokoa raha afaka mihosotra ianao. Ny pitipoà maintso dia tena be mpampiasa ary azo ampiana amin'ny zavatra rehetra manomboka amin'ny vary ka hatrany amin'ny subzis ka hatramin'ny salady.
Hamarino tsara fa mampiditra legioma maitso ravina iray farafahakeliny ao anaty sakafo amin'ny andro hafa ianao hanararaotana an'io fotoana mahafinaritra amin'ny taona io. Jaggery no vitaminina voatifitry ny ririnina. Ny razambentsika dia nihinana jaggery bebe kokoa nandritra ny taranaka maro nandritra ny volana mangatsiaka. Izany dia satria ny jaggery dia singa manafana amin'ny sakafo feno vy sy mineraly hafa izay hanampy anao hanohitra ny hatsiaka.
ahoana ny fandokoana bisikileta
Tsara ho an'ny olona manana tosidra ambony izy io, ary manampy amin'ny fandevonan-kanina koa. Ny Jaggery dia manampy tokoa amin'ny fampitomboana ny hemoglobin, ka tsara ho an'ny vehivavy tsy manana anemia. Fanampin'izay, raha miezaka misakafo mahasalama ianao fa toa mpitroka tsindrin-tsakafo lehibe aho, sombin-jaggery kely aorian'ny fihinananao dia manome fahafaham-po an'ireo faniriana mamy ireo! Ampio amin'ny dals-nao, manaova laddus, na ampiasao hanamboarana ny anao Manolo siramamy voadio ho fampitomboana ny sakafo.
Raha mila fomba fahandro tsotra ho an'ny laddu ririnina tonga lafatra ianao dia zahao ity lahatsoratra til-gud ity. Bajra, Jowar, Makai, ary Ragi dia voa goavam-be izay tokony hohaninao bebe kokoa amin'ny ririnina. Raha ny marina dia tokony hihinana bebe kokoa amin'ireo voa ireo ianao mandritra ny taona.
Ireo millety rehetra amin'ny ririnina ireo dia misy gliosida betsaka ary manome angovo ny vatana ary azo alaina amin'ny fomba maro samihafa. Bajra Khichdi dia ankafizin'ny ririnina ao Rajasthani. Sakafo iray ao amin'ny tokantrano Indiana atsimo, Ragi Dosa dia misy manerana an'i Gujarat amin'ity vanim-potoana ity.
Tsy misy gluten koa izy ireo ary afaka manamaivana ny fivontosana sy ny fanaintainana. Ity misy fomba fahandro Paratha tena mahasalama feno voamaina feno sy zavatra maro hafa izay fanampiny tsara mampidina ny siramamy ao anaty ny Corn, loharano misy vitamina B12, manome hery ny vatana amin'ny ririnina ary mitazona ny hoditra ho salama. Koa mankafiza Makki Ki Roti miaraka amin'ny Sarson Ka Saag anao amin'ity vanim-potoana ity.
Ny daty dia singa mahasalama mampino ary manampy betsaka amin'ny ririninao. Mahasalama tokoa izy ireo satria kolesterola aotra, ambany tavy ary sôdiôma no anana: herinaratra misy vitamina tena ilaina izy ireo ary misy vitamina C be dia be azon'ny volonao sy ny anao mitazona ny hoditrao ho salama amin'ny maina. Winters Mihinana azy ireo araka ny maha-izy azy satria matsiro, na sotroinao amin'ny ronono mafana, na koa manamboatra daty sy voanjo voa izay misy ghee manankarena mineraly koa. Na, azonao atao ny manandrana manaikitra sasany amin'ireo angovo tsy misy daty fotsiny fa misy voa sy voanjo mahafinaritra ary tavy mahasalama izay mety tsara amin'ny sakafon'ny ririnina, ary maharitra iray volana eo ho eo izy ireo ka vao manomboka iray monja. mila manomana fanompoana lehibe ny volana mba hankafizanao sakafo maivana ara-pahasalamana amin'ny herinandro ho avy.
Ny fihinanana sakafo mety amin'ny fotoana mety dia hanampy ny vatanao hiatrika tsara kokoa ny adin-tsaina amin'ny manodidina azy. Manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hisaintsaina ny sakafonao Misaotra anao mijery sy mahita anao amin'ny manaraka ary mijanona ho glam.
Ahoana no ahafahako mamoy lanja amin'ny ririnina?
Ny famoizana lanja dia sarotra. Toy ny, tena, tena, mafy tokoa. Ny ankamaroan'ny olona manandrana dia tsy mahavita azy na miafara amin'ny fanarenana izay very, indraindray bebe kokoa.
Ary tsy izany fotsiny satria mahavariana ny pizza - ny vatanao dia mihemotra rehefa manandrana mandany lanja ianao. Ny tavy izay voatahiry ao amin'ny tavy adipose-nao dia vatan'ny angovo avo indrindra izay azon'ny vatanao ampiasaina hamatsiana ny sela ao anaty pince. Raha misy antony tsy ahafahanao mihinana, na mila angovo kely fanampiny ianao hitombo na hitombo dia afaka mitodika mankany amin'ny tavy ny vatanao - izany no mahatonga ny fananana tavy tena tsara raha ny fahitana velona! Na izany aza, mety hieritreritra ianao fa mora very ny lanja: mihinana kely kokoa noho izay ilainao, terena ny vatanao hampiasa tavy sasany, ary avy eo mihinana fatra mahazatra indray raha ny habe no tadiavinao.
ny fanafody an-trano noho ny fitavoan'ny arabe
Saingy ny vatana dia tsy te-hahavery ny buffer an'ny angovo - na lehibe na kely ny fivontosana - ka rehefa mitsitsy kaloria ianao dia misy fiatraikany amin'ny fomba izay manasarotra ny famoizana lanja. Ny ankamaroan'ny fihemorana dia entin'ny fiovan'ny hormona. Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia ny leptin, hormonina nafenin'ny selanao matavy.
Arakaraka ny haben'ny sela matavy anananao no amokarany leptin betsaka kokoa. Ka rehefa mihena ianao dia hihena ny haavon'ny leptin. Ny ampahany amin'ny atidohanao toa ny hypothalamus dia mandika ny leptin ho tsy hanoanana, ary miditra izy ary manomboka miteny amin'ny vatanao mba hitsitsy angovo ary hihinana bebe kokoa hananganana ireo tahiry ireo.
Ny taova hafa koa dia mampiasa hormonina hanampiana ny atidohanao hampihena ny fihinanana solika. Ny vavoninao dia milaza amin'ny atidohanao fa tsy mameno amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny haavon'ny hormonina ghrelin. Mandritra izany fotoana izany, ny sarakaty dia mamoaka insuline kely kokoa, izay mifehy ny siramamy amin'ny ra, sy ny andamylin, izay maneho fahatsapana fahafenoana.
Ka rehefa mampihena ny fatran'ny kaloria ianao dia hiakatra ny haavon'ny ghrelin ary hihena ny insuline sy ny amyline, izay manondro ny ati-dohanao hampitombo ny filan-komana - izay mahatonga anao hahatsiaro noana. Fikarohana maromaro no nanaporofo fa mamaly ny fiovan'ny hormonina ny atidohanao amin'ny alàlan'ny fahalalanao bebe kokoa ny sakafo rehetra nosoratanao sy ny fampitomboana ny fifaliana azonao rehefa manome ianao. Mandritra izany fotoana izany, ny sisa amin'ny vatanao dia miha mahomby.
Miova, ohatra, ny hozatrao amin'izay alehany. Rehefa mila angovo ny hozatrao, amin'ny ankapobeny dia mampiasa fifangaroan'ny tavy voatahiry sy ny gliokaozy miely izy ireo. Na izany aza, rehefa manaraka sakafo kaloria voafetra ianao dia lasa miantehitra bebe kokoa amin'ny glucose ka lasa mahazo hery bebe kokoa amin'ny sakafo nohaninao fa tsy very ireo magazay matavy izay ezahinao ho very foana.
Izy ireo koa dia manisy fanovana kely hafa hahomby kokoa - ary toy izany koa ireo sela hafa ao amin'ny vatanao. Ity no zavatra tena mahasosotra: tsy mijanona ny famantarana ny hanoanana hormonina rehefa mijanona tsy mihinana sakafo ianao dia misy dikany ho an'ny leptin satria miankina amin'ny haben'ny tavy anananao. Fa ny hormonina hafa mamaly amin'ny ankapobeny ny fihinanana sakafo dia afaka mijanona ao anatin'ity tsingerin'ny famokarana miadana ity na dia miverina amin'ny sakafo ara-dalàna aza.
Ary ireo hormonina ireo dia afaka miova mandritra ny taona maro. Raha najanonao ny fameperana ny kaloria dia manohy mihetsika toy ny mosary ny vatanao - izay ampahany lehibe amin'ny antony mahatonga ny olona lanja mavesatra hamerina azy io indray. Amin'ny ankapobeny, arakaraka ny maha kely anao no mahakely ny angovo ilainao hamenoana ny zava-drehetra.
Saingy tsy fifandraisana tsotra sy mivantana. Ny habetsaky ny angovo ampiasanao isaky ny kilao amin'ny lanjan'ny vatana dia miankina amin'ny hoe navesatra na mavesatra ianao. Ary izany vokatra izany dia hita mazava tsara tamin'ny fanadihadiana tamin'ny taona 2016 izay nanara-maso ireo mpandray anjara tamin'ny fifaninanana fihenan-danja tamin'ny fahitalavitra nandritra ny enin-taona.
Manokana, ny mpikaroka dia nijery ny tahan'ny metabolic fitsaharan'ny mpandray anjara: ny kaloria nodoran'ny vatany tamin'ny fitsaharana. Io dia refy iray amin'ny habetsaky ny angovo ilaina mba hitazomana ny sela selan'ny olona iray. Taorian'ny fifaninanana naharitra 30 herinandro dia very eo ho eo amin'ny 58 kilao ny mpandray anjara 14 ary nihena 610 kaloria isanandro ny tahan'ny metabolika fitsaharana.
Tamin'ireo taona nanaraka, na izany aza, nahazo salanisa 40 pounds izy ireo ary tsy nitombo arak'izany ny tahan'ny metabolika. Tamin'ny farany, nandoro kaloria 500 kely isan'andro izy ireo noho ny tokony ho izy tamin'ny lanja farany. Midika izany fa amin'ny ho avy dia tsy maintsy mametra ny tenanao ianao mba hamoizana lanja noho ny tamin'ny voalohany.
Betsaka ny fanadihadiana hafa tonga tamin'ny fanatsoahan-kevitra mitovy amin'izany. Rehefa avy nihena ny lanja, na dia mihombo aza ny lanjany, ny vatany dia mihinana kaloria kely kokoa isaky ny kilao fotsiny noho ny olona mitovy habe aminy izay tsy niova ny lanjany. Midika izany fa mila mihinana kely kokoa izy ireo mba hitazomana an'io lanjany io noho ireo olona mbola tsy mavesatra velively, ary mihombo haingana ny lanjany raha mihinana be loatra izy ireo.
Tsy mbola fantatra mazava hoe haharitra hafiriana ny fiovana rehetra hiadiana amin'ny lanja - na raha toa ka lasa tanteraka izy ireo. Saingy tsy ny olona rehetra no miaina ny haavon'ny fanoherana mitovy amin'ny vatany. Ny mpahay siansa dia mbola manandrana mamantatra ny fiantraikan'ny génétique an'ny olona, ​​ny sakafo hohaniny ary ny antony hafa amin'ny fihetsiky ny olona iray amin'ny sakafo iray.
Fa rehefa dinihinao ny hamafin'ny vatana amin'ny fihenan'ny lanja, tsy mahagaga raha maro ny olona no miady aminy. Misaotra anao nijery ity fizarana an'ny SciShow ity! Ary ambonin'izany rehetra izany ho an'ireo mpiaro antsika ao Patreon. Ny fanohizanao mitohy no ahafahanay mamorona lahatsoratra fampianarana toa an'ity.
Raha mankafy ny asanay ianao ary maniry ny hanohanany anay hatrany, afaka mahita bebe kokoa momba ny fomba hidirana amin'ny vondron'olona mpiaro anay ao Patreon.com/SciShow
Inona no tokony hohaniko amin'ny ririnina mba hihena?
Fampihenan-danja amin'ny ririninaTorohevitra fanatanjahan-tena
Alaharo ny vatanao. Ny ririnina mangatsiaka amin'ny maraina sy ny hariva dia mety hampidi-doza anao raha tsy manao akanjo sahaza ianao.
Mijanona ho maina. Ny lamba sasany, toy ny landihazo, dia mitazona hamandoana, mampidina ny maripanan'ny vatanao amin'ny andro mangatsiaka.
Ataovy hydrated foana.
Fantaro hoe rahoviana no hijanona.
Afindra ny fanazaran-tena.
Salama ry havana, izaho dia Bob Schrupp physiotherapistBrad Heineck physiotherapist ary miaraka isika no mpahay fitsaboana ara-pahasalamana malaza indrindra amin'ny Internet raha ny hevitray mazava ho azy fa BobWe dia efa niresaka tamina paoma Eny tokoa, izany dia ho ampahany amin'ny sakafo atoandro aorian'izay, koa oh henonao ve izany? Manana vahiny eto izahay Yep hi Craig tamin'ny andro lasa izay eto aho anio hiresaka momba ny hakitroky ny kaloria. Hiresaka momba ny fomba fihinanana sakafo tsara sy hampihenan-tena àry isika, ary tena tsara izany. Heveriko fa hanana fampisehoana an-tsary mahafinaritra eto isika ny amin'ny fomba fihinanan-kanina sy ny antony fihinanana sakafo sasantsasany ary amin'ny fomba mahasalama.
Ka heveriko fa zavatra mahafinaritra izany, saingy i Bob mahita olona vitsivitsy eny tsy mbola hitantsika teo aloha. Raha vaovao amin'ny fantsonao ianao azafady maka segondra hisoratra anarana aminay Manolotra lahatsoratra momba ny fomba hijanonana ho salama sy tsy hisy fanaintainana Ary apetrakay eo na hidina isan'andro ny bokotra famandrihana, ary raha mbola tsy nanao ianao dia azafady Matetika izahay dia manana fanomezana maimaim-poana be dia be any, ny fifaninanana azonao idirana hahazoana zavatra maimaim-poana. Eny ary, andao hiresaka momba an'i Craig, Craig, maninona ianao no tsy manome ny fampidirana anay.
Mpianatra PhD ao amin'ny UW La Crossemastering ao amin'ny Community Health Education aho izao ary manasongadina ny fihinanan-tsakafo sy ny fivadihan'ny aretina amin'ny alàlan'ny sakafon'ny zavamaniry feno. Ary Craig azonao lazaina aminay ve? kely fotsiny momba ny tantaranao manokana satria nilaza ianao fa nihena lanja ary mahaliana ihany koa ny tantaran'ny asma.
Mahaliana fa mipetraka any Wisconsin aho. Tsy mahazaka laktazy aho. Niasa tao amin'ny ozinina fromazy aho ary ilaina izany raha mipetraka any Wisconsin ianao.
Eny, liana tamin'ny sakafo aho rehefa nanjary tsy mahazaka lactose, saingy hitako fa mahaliana kokoa izany rehefa nanomboka niasa tamin'ny sehatry ny fromazy aho, nikatona izahay hanao ny fromazy ho an'ny sakafo atoandro ary avy eo dia nanomboka niverina izahay ary avy eo nikatona tamin'ny faran'ny ny andro ary ny hitako dia misy ifandraisany amin'ny aretim-po koa io, ny ao anaty fantsom-boaloboka rehefa nanaovanay fromazy dia rakotra fromazy ny fantsona ary ahoana raha raisintsika ireo? Ny fantsom-panafahana amin'ny faran'ny andro dia tsy maintsy nesorintsika ilay fromazy mafy indraindray, nikatona loatra ireo fantsom-boanjo ireo ka tsy afaka namakivaky ianao ary tsapako fa ny zavatra nohaniko dia misy akony tsy amin'ny lanja ihany, fa amin'ny fahasalamako koa. . Nijanona tsy nihinana fromazy intsony aho rehefa nanomboka niasa tao amin'ny ozin-kesika, nieritreritra fotsiny, Andriamanitra ô, inona no ataony? Tsy vitan'izay ihany fa be kaloria koa ny fromazy. Ny fromazy iray-grama goba, sahabo ho roa cubes ny haben'ny, dia misy kaloria 100, ary raha mandinika izany ianao dia fromazy kely.
Sahala amin'ny haben'ny paoma iray io angamba dia misy kaloria 100, fa raha fromazy kosa dia mety ho 600 kaloria. Noho izany, ny fijerena sakafo toy izao ary manomboka mahita hoe avy aiza ny kaloria anao dia afaka manampy anao sary an-tsaina hoe ohatrinona ny sakafo azonao hohanina nefa mbola very lanja ihany. Craig, ohatrinona ny lanja very anao? Nanomboka nanaraka sakafo iray mifototra amin'ny zavamaniry sakafo iray manontolo aho taorian'ny nahitako ny vokadratsin'ny fromazy ary very 40 kilao aho ka tamin'ny lanjako mavesatra indrindra dia teo amin'ny 166 aho izao, 128130 teo ho eo aho.
Ary mijery anao aho Toa olona mahia voajanahary ianao. Ny tiako holazaina dia tsy toa olona efa matavy loatra ianao. Ie, mahaliana fa ny tiako holazaina dia eny, nieritreritra aho fa ianao dia iray amin'ireo olona tsara vintana izay nihinana izay nilainy ary tsy nitombo lanja velively.
Eny, izao dia mihinana izay rehetra tadiaviko aho ary tsy lanja velively, fa alohan'ny hihinanako izay tadiaviko ary laniko, dia lazao azy ireo ny taonanao, satria mieritreritra aho fa tanora noho ianao ianao, eny, 36 taona aho antitra, betsaka ny olona milaza amiko fa toa 20 taona eo ho eo aho, marina ary marina ny ataonao, ka vavolombelona ianao amin'ny fizahana sakafo avy amin'ny zavamaniry, marina, eny, eny, ary tsy nilaza ve ianao ny asma anao? Miova amin'ity sakafo ity Eny, rehefa manapaka ny vokatra vita amin'ny ronono amin'ny sakafo fihinako aho. Voan'ny asma aho nandritra ny 30 taona ary indray mandeha dia nanapaka ny ronono aho dia nahafinaritra. Hihazakazaka marathon tapany any Green Bay aho.
Te-hihazakazaka marathon tapany foana aho. Nataoko izany ary ny ray aman-dreniko dia toa an'i Craig, aiza ny inhaler-nao? Aiza ny soritr'aretin'ny asma anao, inona ary no nalehako, eny, tsy manana asma intsony aho, tetezamita tsikelikely izany, arakaraka ny nijanonako tamin'ny fampiasana ireo vokatra biby tamin'ny sakafoko no nitomboany ny tombony azo tamin'izany ary nanomboka teo aho nihazakazaka ny antsasaky ny hazakazaka marathon ary nilaza fa afaka mihazakazaka marathon aho ary avy eo nanao izany ary nahafinaritra ahy efa ho 14 minitra talohan'ny nidiranao tany amin'ny BostonCool, noho izany ny hazakazako voalohany ary tsy mbola nihazakazaka teo aloha aho satria tsy afaka, noho izany dia nahazo sary izahay. Ka inona izany? Ka izay ananako eto dia mahaliana tokoa, letany dimy kilao ity, kaloria 500 koa, ka tiako holazaina fa raha mahatsapa ianao fa sarotra be izany dia tsy tiako ho fantatrao, esory ny tenanao hiala amin'ny sezanao , aza avela hilatsaka 500 kaloria izy, ary eto aho izao, ity no asehon'ny kaloria 500 tahaka ny broccoli cauliflower sy karaoty mbola lehibe sy lehibe dia lehibe fa tsy lehibe loatra izao dia mihinana kaloria 2000 eo ho eo isan'andro ianao hahafahanao manana vilia baolina efatra isan'andro, mihinana ary mahazo kaloria 2000 ianao, any amin'izay alehanao, mety ho voky ianao alohan'ny hahavitanao ary raha mila mihinana tontolo andro ianao dia hihena satria tsy ampy kaloria. amin'ny andro iray, araka izany, ny tiako holazaina dia hoe ao io fotsiny ary porofon'izany ny fijerin'ny kaloria 500, izay mameno ny vavoninao, satria raha ny marina dia sahala amin'ny haben'ny vavonintsika io.
Inona no ananantsika any? Eny ary, ary misy an'i W kely kely ireo. Voanjo M & Ramatoa Eny, ary voanjo M & R 500 kaloria izany
Wow, ary rehefa ampitahanao amin'ny 500 ireo dia tianao ve ny hampiakatra izany? Izay ny fahalemeko eto, Voanjo M & Ramatoa Mahagaga. Iza amin'ireo no hameno ny vavoninao, iza no hameno anao? Izany no mahatonga antsika hikororoka azy tontolo andro ary tsy ho voky mihitsy.
Raha mihinana an'ity isika dia ho voky, ankehitriny mazava ho azy fa tsy hihinana irery irery aho izao, mety hampiasa vinaingitra balsama aho amin'io zavatra io hanoloana ny menaka oliva satria io menaka oliva io no ampiasaina hametahana an'io izay mety hahatonga ny 1000 Calories mivoaka, ka 500 kaloria ho azy io Eny, izany kaloria 500 izany raha ampitahaina amin'ilay kely fantatrao rehefa kaloria 500 Ka kaloria 500 no mifampijery akaiky ary mieritreritra aho fa tsara izany satria salama ny menaka oliva, ary izany rehetra izany dia mitovy kaloria tsara Ie tiako holazaina fa kaloria fanampiny izany rehetra izany. Azonao atao ny mampiasa vinaingitra balsama, afaka mampiasa vinaingitra hafa ianao, ny sasany amin'izy ireo dia tena vinaingitra Flavoured, afaka miditra an-tserasera amin'ny olivetap.com ianao, ary afaka manamarina ny sasany amin'ireo vinaingitra misy tsiro izay ananan'izy ireo ary azonao ampiasaina izany. fantatry ny toerana fa io dia safidy kaloria ambany dia ambany izay mbola hamandoana ny saladinao, ary io no tadiavinao ary misy tsiro tena tsara, na azonao atao ny mampiasa an'io ary manipy kaloria 500 amin'ny saladinao, azo antoka 500 kaloria amin'ny kaloria 2 000 -Diet, inona no betsaka amin'ny tsiro amin'ny saladyo, eny, avy eo ohatra iray hafa eto izay ovy legioma 500.
Tsy maintsy notapahiko ilay ovy mamy Ka ity misy rivotra vitsivitsy, fa raha mamoaka ovy mamy na mangotraka ovy ianao dia nampiseho ny fanadihadiana fa ny ovy dia iray amin'ireo sakafo mameno indrindra azon'ny olona atao. Ny apetrakay amin'ity ovy ity dia misy olana. Ka rehefa mametraka dibera amin'ny ovy ianao dia ampitomboinao ny hakitroky ny kaloria toy ny menaka oliva satria matavy 100% ny dibera, toy ny menaka oliva 100% Ka inona no hatoroinao amin'ny fanaovana ovy? Ka ho an'ny ovy dia mandeha mankany salsa na laoka na zavatra hafa aho satria rehefa mihinana ovy nendasina ianao dia maina Tena ny zavatra tadiavinao atao dia ny mandena azy io mba hahatonga azy io hanandrana izay tianao na raha tsy izany dia avelanao hofongarina izy ireo ovy manondraka ron-kena legioma sasany, ron-kena legioma ambany, eny, mazàna dia avo amin'ny sodium izy io, noho izany dia maniry ny ron-kena legioma ambany ianao, tsy asiana sira, misy zavatra toy izany, misy eny, na afaka manamboatra anao ianao raha tsapanay ho mpanafika izahay fa inona no atrehinay? Manana oatmeal kely isika, saingy oatmeal maina izao.
Ka raha ny marina, ny otrikaina maina dia be kaloria tokoa. Na izany aza, raha nanampy rano ianao ary namerina namerina azy io dia nivonto tao an-kibonao izy io ka mety ho feno aho fa tokony ho nanao an'io aho taloha saingy mety ho ny antsasaky ny lovia lovia no azo antoka fa ny zavatra mahafinaritra momba ny hakitroky kaloria dia ny oatmeal na Vary, raha afangaroinao amin'ireto sakafo ireto dia hameno kokoa ny kibonao izy ireo, ka hanampy voaroy foana isa-maraina isaky ny manana oatmeal aho satria tsy kaloria ny voankazo satria ny hakitroky ny kaloria dia mifototra amin'ny zavatra sasany, ny habetsahan'ny rano amin'ny vokatra ny habetsahan'ny fibre Diet dia ny haben'ny tavy amin'ity vokatra ity sy ny habetsaky ny siramamy ary na fantatrao ny gliosida na izay tianay hampiasaina ny teny hoe siramamy na gliosida na starch Ny vokatra be kaloria dia matetika matavy na tsy ampy rano na fibre. Ka io matavy madio io, ny tavy 1 grama dia misy kaloria 9 isaky ny grama, ny siramamy 1 grama dia manana kaloria 4 isaky ny grama, noho izany dia efa avo roa heny ny hakitroka, miorina amin'ny fijerintsika ny tavy sy ny siramamy, noho izany miaraka amin'ny voankazo ary izy ireo koa milaza ve fa misy rano bebe kokoa ao amin'ny voankazo? Ka indraindray tsy mahazo rano aho ary tsy mihinana gliosida firy.
Azo atao ve izany satria mihinana gliosida vitsy kokoa, tsy mahazo rano firy amin'ny sakafo ary mila misotro bebe kokoa? Ny tiako holazaina dia hoe: Mety ho, raha nanana ovy mamy ianao, dia be ny rano ao, raha namono ovy ianao dia be dia be ny rano. Aiza rehefa manana zavatra toy izao ianao dia maina tsara, sa fantatrao? ary nieritreritra foana aho toy ny hoe rehefa mihinana voanjo dia mihinana voanjo voaendy aho izao alohan'ny mazava ho azy fa tsy ampy rano amin'ny sira fa ankehitriny dia toa mbola saika maty rano amin'ny tsy fihinanana rano amin'ny alàlan'ny sakafo mihitsy, tena eny, mahaliana izany zavatra rehefa mihinana voankazo sy legioma bebe kokoa ianao. Tena mahazo rano bebe kokoa ianao, midika izany fa tsy mila misotro rano betsaka ianao satria avy amin'ny loharano hafa io.
Raha azoko tsara ny anao, raha misotro rano miaraka aminy isika, dia afaka mihinana voanjo M & Ramatoa ary izany no fomba iray ahazoana azy. Mahafinaritra ahy ianao.
Ankehitriny mahafinaritra izany. Tsia, eny, ka hoy aho hoe misotroa rano be dia be mba hilomano ireo. Raha tsy izany dia hitsofoka ao anaty ny rano ary hijanona miaraka amin'ity sisa tavela ao an-kibonao ity ihany ianao ary tsy hameno anao izany.
Inona izany amin'ny farany, niresaka momba izany ve isika? Tsia, 500 kilao eo ho eo ny kalôria, tiako holazaina izany, tsy hilaza amin'ny olona mihitsy aho hoe aza mihinana azy, fa ny tena izy, rehefa mihinana sakafo ianao dia tsy maintsy mahatsapa fa mbola 500 kaloria izany ka raha tsara ianao na tsia, tsy maninona. Eny tsy maninona Fa mahasalama izany fa tsy dia mandeha lavitra loatra ka tsy haiko raha niresaka an'io isika fa mitovy amin'ny haben'ny vavonin'olombelona tsotra izao. Eny, mivelatra ny vavony ary mivelatra be ny kiboko.
Mihinana betsaka aho satria mihinana betsaka amin'ireo sakafo ireo. Ka ny vavoniko dia tokony ho azo ovaina, raha tsy izany dia ho faty mosary aho. Ny tiako holazaina dia aza mosarena.
Ny tiako holazaina dia mihinana betsaka kokoa fotsiny aho ka ahoana ny momba ny satiety? Ny tiako holazaina dia mihinana voanjo aho ary toa leo azy ireo haingana kokoa. Hainao ny tiako hambara? Ie impiry aho no afaka mihinana ny sasany amin'ireo sakafo hafa ary mazava ho azy fa afaka nihinana betsaka kokoa aho mazava ho azy fa tsy tsapako izany fa fantatrao fa mbola noana aho rehefa avy nihinana almond ary toa naharitra ela kokoa aho. Misy zavatra tadidy fa misy fibre izy io, ka ny fibre no mahavoky anao.
Azonao atao ny misotro an'io, tsy hanome soso-kevitra azy aho, saingy tsy misy fibre ao anatiny hahatonga anao hahatsapa ho lava kokoa, ny fibre no fitaovam-piadiana miafina Amin'ny fahafaham-po matetika no tiako holazaina hoe eny, tena izy dia fibre, ny haben'ny fibra ary ny Ny habetsaky ny rano vokatry ny sakafo dia mitazona anao ho lava kokoa, ka faly ianao. Ary izany no zavatra iray hitan'izy ireo tao anaty ovy dia rehefa mahandro ovy ianao dia be ny rano ao aminy izay mitazona anao hahatsapa ho lava kokoa ary avy eo tsy lazaina intsony ny fibra rehetra izay ao koa, eny, ahoana, fantatro tara isika, fa ny tiako holazaina zavatra iray fotsiny dia ahoana ny spaghetti mihitsy? Mihinana spaghetti isan'andro aho. Izy ireo ve? Inona no hohaninao miaraka aminy? Matetika aho no mihinana mofo miaraka aminy.
Inona no ataonao? Mametraka zavatra amin'ny spaghetti-nao ve ianao? Manana saosy spaghetti aho. Nividy saosy spaghetti tsy matavy aho izay novidiako I Syringe tao amin'ny Spars ParsleyItaliana tiako ny masirasira ara-tsakafo tsy fantatro raha efa nisy masirasira ara-tsakafo ianao, misy tsiro mahafinaritra io, tsy tiako io tamin'ny voalohany, fa na izany aza namboarina ny tsiroko, ary avy eo somary nopotserina Pepper teo aminy dia ampiasaiko kely, tsara izany, malahelo spaghetti aho. Ie, ary avy eo te-hiteny zavatra iray hafa aho, izany dia ny voankazo 500 kaloria, ny hany masoko dia ny blackberry sy ny voaroy tsy azoko ireo blueberry eto, ka izany dia sakafo tokony ho 2,5 pounds, ka tokony ho eto koa izy ireo , ka 500 mihinana kaloria Oh, tokony ho eo izany.
bisikileta cruiser mahafinaritra
Ka tsara ihany koa izy ireo. Oh eny eny tena tsara izy ireo ary tadidio fa ireo sakafo rehetra eto dia misy gliosida ao anatiny. Ireo sakafo ireo dia tsy misy gliosida, fa kaloria 500, izay gliosida 5 pounds, ka ny karbaona dia tsy voatery ho ilay lehilahy ratsy fa ny mpanelanelana na ny sakafo mitondra ny gliosida misy tavy sy ny sisa rehetra, satria izany dia ny Karbohidraty loatra, fa be tavy koa ao, sa tsy izany? Ary izany dia mampiakatra ny hakitroky kaloria an'ity sakafo ity, noho izany dia mino aho fa misy siramamy ao anatiny koa.
Eny, fa raha jerenao izany dia samy milaza ny rehetra fa ny gliosida no lehilahy ratsy. Ireo sakafo matavy be nohanintsika ireo no tena manimba kokoa noho ny gliosida satria samy misy gliosida ihany koa. Ka jereo hoe ohatrinona ny sakafo azonao ary jereo ny kely azonao hanina eto, ary avy eo misy fandokoana ao ary manana ny zavatra hafa rehetra tiantsika hialana isika ary manalavitra an'i Well, amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny hafa, eny, izahay dia te-hisaotra an'i Craig betsaka noho ny fandaniany fotoana, tena mahaliana fa nanelingelina ny sakafoko manontolo izy.
Fa tsara izany. Hanao fanovana vitsivitsy aho, fa ho hitantsika ary ho hitantsika izay hataontsika eto. Handeha hisotro rano miaraka amin'ny M & Ms aho izao, marina izany.
Farafaharatsiny misotro rano ianao. Misaotra indray Craig, oh eny, azafady. Misaotra ry zalahy.
Misaotra nanatevin-daharana anay.
Inona avy ireo sakafo tokony hohaninao amin'ny ririnina?
Torohevitra Sakafo amin'ny ririnina: ny voa dia manampy vitamina E, B6, niacin ary folate amin'ny sakafo. Fantatsika rehetra fa ny fihinanana sakafo dia manome solika ny vatantsika hiasa tsara sy hijanonantsika ho salama.
Ahoana ny fomba hampihenana lanja amin'ny sakafo ririnina?
Drafitra fihinanan-tsakafo 5 amin'ny ririnina ambony indrindra amin'ny fahaverezan'ny lanja 1 Makà rano matimaty iray vera ary ampio tantely iray sp. 2 Sotroo ity rano ity amin'ny maraina amin'ny vavony foana. Ny tantely dia naseho fa mampisondrotra tsara ny haavon'ny kolesterola ao amin'ny vatantsika ary mitazona ny lanjan'ny vatana koa. 4 Ny tantely dia mitazona antsika hiasa sy ho salama bebe kokoa mandritra ny tontolo andro.
Fa maninona ianao no tsy misakafo firy amin'ny ririnina?
Ny foto-tsakafon'ny ririnina dia mitaky be dia be ao an-kibonao ka mameno anao ara-bakiteny, noho izany dia mihinana kaloria vitsy kokoa ianao amin'ny ankapobeny rehefa mihinana azy eo am-panombohan'ny sakafo, hoy ny fanadihadiana iray tamin'ny Penn State University 2007.